लेनिनसँग क्लारा जेट्किनको कुराकानी - मूल्याङ्कन अनलाइन
मूल्याङ्कन अनलाइन | December 9, 2017
लेनिन, क्लारा जेटकिन र क्रुप्सकाया ।
विश्वमा उपनिवेश बनाउने होडबाजीको परिणाम स्वरुप सन् १९१४ मा पश्चिमा पुँजीवादी देशहरुको आपसमा झगडा भई भड्किएको प्रथम विश्वयुद्धताका उनले सो युद्ध मजदुर तथा महिला वर्गका लागि हितकर नभएको र नितान्त पुँजीजिवी वर्गको स्वार्थको झगडा भएको बताइन् । र, उनले सन् १९१५ मा जर्मन शहर बोनमा शान्तिको नारा दिई महिलाहरुको विशाल भेलाको आयोजना गरिन् । त्यस भेलामा सहभागी विश्वका अग्रगामी हजारौं महिलाहरुमाझ उनले शान्तिको प्रस्ताव राखिन्, जुन पारित भएको थियो ।
सन् १९१७ मा लेनिन र बोल्शेविक पार्टीको नेतृत्वमा रुसमा अक्टोबर समाजवादी क्रान्ति सम्पन्न भयो । रुसमा सोभियत समाजवादको स्थापना भयो । लेनिनका अनुसार सोभियत समाजवादी क्रान्ति महिला मुक्तिको क्रान्ति पनि थियो ।
सोभियत क्रान्तिअघि र पछि पनि क्लारा जेट्किन र लेनिनबीच महिला मुक्ति आन्दोलनको सन्दर्भमा थुप्रै छलफलहरु भए । ती दुई विश्व नेताहरुबीच राम्रो सम्बन्ध सम्पर्क पनि थियो । उनै विश्व महिला मुक्ति आन्दोलनकी नेतृ क्लारा जेटकिनले लेनिनबारे संस्मरण लेखेकी छन् ।
सन् २०१७ अझै सकिएको छैन । यो वर्ष रुसमा सन् १९१७ मा भएको विश्वको पहिलो समाजवादी क्रान्तिको शतवार्षिक उत्सवको वर्ष हो । विश्वको पहिलो समाजवादी क्रान्ति रुसी अक्टोबर क्रान्तिका नायक लेनिन हुन् । यसै सन्दर्भमा लेनिनसँग निकट रहेकी विश्व महिला नेतृ क्लारा जेट्किनले लेनिनबारे लेखेको संस्मरण यहाँ प्रस्तुत गरिन्छ । – सम्पादक)
लेनिनले हाँस्दै टाउको हल्लाउनुभयो, “असाध्यै राम्रो, तपाईं पार्टीको राम्रो बचाउ गर्दै हुनुहुन्छ र तपाईं जे भन्दै हुनुहुन्छ, निःसन्देश सही छन् । तर यी सब जर्मनीमा गरिएका गल्तीहरुको सफाइ मात्र हुन्, तिनीहरुको औचित्य होइनन् । गल्ती हरहालतमा गल्ती नै हुन्छ । के तपाईं हामीलाई गम्भीरतापूूवर्क यो आश्वासन दिन सक्नुहुन्छ कि यौन तथा वैवाहिक प्रश्नमा परिपक्व, जीवन्त ऐतिहासिक भौतिकवादी दृष्टिबाट बहस गरिन्छ ? त्यसका लागि गहिरो तथा बहुआयामिक ज्ञानको जरुरत पर्छ, थुप्रोे सारा सामग्रीहरुमाथि बिलकुल स्पष्ट माक्र्सवादी समझदारीको आवश्यकता छ । आज तपाईंसँग यस्तो शक्ति कहाँ छ ? यदि त्यो हुन्थ्यो भने जुन पुस्तिकाको मैलेउल्लेख गरें त्यस्तो कुनै पुस्तिका पढाइ एवं बहसका गोष्ठीहरुमा राखिँदैनथ्यो । त्यस्ता सामग्रीको आलोचना गर्नुको बदला प्रशंसा एवं प्रचार पो गरिन्छ । समस्याको यस्तो निरर्थक गैरमाक्र्सवादी बहसको के नतिजा आयो ? यही होइन, कि यौन तथा वैवाहिक प्रश्नहरुलाई व्यापक सामाजिक प्रश्नको अंग ठानिदैन ? होइन, योभन्दा पनि राम्रो, स्वयं ठूलो सामाजिक समस्यालाई नै यौन समस्याको एउटा हिस्सा, एउटा गौण प्रश्न मान्न थालिएको छ । मुख्य कुरा नै गौण बन्दछ । यसबाट त केवल प्रश्नको स्पष्ट बुझाइ ओझेलमा पर्न जान्छ, त्यसले त आमरुपमा मिहेनतकश महिलाहरुको चिन्तनलाई, उनीहरुको वर्ग चेतनालाई नै धमिलो, बोधो बनाइदिन्छ । एउटा अर्को महत्वपूर्ण कुरा छ, ज्ञानी सुलेमानले पनि भनेका थिए कि हर चिजको आफ्नो समय हुन्छ । म तपाईसँग सोध्न चाहन्छु, के अहिले सर्वहारा महिलाहरुलाई यस्ता बहसमा अल्मलिने फुर्सद छ कि प्रेम कसरी गर्नुपर्छ वा कसरी गराउनुपर्छ, अतीतमा यी सब कसरी हुन्थे, आज कसरी हुने गर्छन्, भविष्यमा कसरी होलान्, त्यो पनि विभिन्न राष्ट्रहरुमा । र, यसैलाई गर्वका साथ ऐतिहासिक भौतिकवाद भनिन थालिएको छ । अहिले महिला कमरेडहरु र तमाम मिहेनतकश स्त्रीहरुको सारा ध्यान त्यस सर्वहारा क्रान्तितिर लगाउनु आवश्यक छ, जसले वैवाहिक तथा यौन सम्बन्धहरुमा सच्चा परिवर्तन ल्याउनेछ । तर, अझै त हामीले विवाहका रुपहरुको बदला अर्कै समस्याहरुमाथि ध्यान दिनु आवश्यक छ । सोभियतहरुका समस्याको साथसाथमा भर्साइ सन्धि तथा मिहनेतकश महिलाहरुको जीवनमा त्यसको प्रभावको प्रश्न, बेरोजगारी, घट्दो वेतन, कर तथा अरु प्रश्न जर्मन सर्वहाराको एजेण्डा (कार्यसूचि) मा अहिले पनि सामेल छन् । संक्षेपमा म मान्दछु कि सर्वहारा महिलाहरुका लागि यस्ता किसिमका राजनीतिक—सामाजिक शिक्षण झुटा छन् , बिलकुल गलत छन् । यस मामिलामा तपाईं कसरी चुप रहन सक्नुभयो ? यसको खिलाफ तपाईंले आफ्नो अधिकारको उपयोग गर्नुपर्छ ।”
अनुवादक : रमेश सुनुवार
प्रकाशक : प्रगति पुस्तक सदन, बागबजार
« जीतपछि गगन थापा – ‘काँग्रेसलाई पुनःसंरचना गर्छु’ (Previous News)
(Next News) ‘परिणाम अपेक्षाकृत, अब पार्टी एकता’ – बाम गठबन्धन »